Garaad-Daran - Hoygamaansada
Geeri iyo nololeey!
Guluf lagu negaadaay!
Gabno laga dhergaayeey!
Gabbal dumay habeenoo
Hadh gadiidan yahayeey!
Lammaan aan is-geyinoo
Guri qudh ah u hooydaay!
Gaaxdeedu waxay tahay,
Maan garan xogtaadee,
Maxaad uga gol leedahay?
Ma wax gaar ah baad too
Goonidiisa jira oo
Garab aan u baahnayn?
Mise gobol dad-weynaha
Ka go'aynnin baad tahay?
Maadigaa ah Gaarriye?
Mise laba gudboonoo
Is-geleynin baad tiin?
Bal geddaada ii sheeg.
Gurey iyo cadceedaha
Isku gedo miyaad tiin?
Gacal miyaad wadaagtaan?
Bal Giriig warkiisiyo
Guutadii Fircoon iyo
Waxa boqor la gawracay,
Ama aad gariir iyo
Guri ba'ay u taagnayd,
Googoos u mariyoo;
U galaydh xubnaha oo;
Midba gees u taagoo
Ka gur sheekadoodoo;
Malaayiin gu' oo tegey
Ku dheh gebaggebeeyoo;
Mid kastaa guduudiga,
Halkay galabba joogtiyo
Godolkeeda ii mari.
Sida gacanka Waaheen
Arrin aad gorfeysiyo
Waxaad shalay u guuxdaad,
Maantana ka giigtaa
Dib bay kuu gardaadsheen?
Ma runtaa gaboowdoo
Guul-darradu dhankay tahay?
Guud ahaan waxaad tahay
Dadku kugu go'doonyoo
Isla waa go'aanoo,
Mid baad geesi adagoo
Gabbanayn la tahayoo;
Mid baa ceel ganuuniyo
Kuu haysta gocoroo;
Mid baa kugu goblama oo
Haddii saxar ku gaadhoo;
Gaadaa wax boobiyo
Mid baad good la tahayoo;
Mid baad garab laxaadliyo
Ruux guda abaaloo,
Loo galo wanaag iyo
Gaashaan la tahayoo;
Cidi gaadhi waydee
Dadkan kugu gabaabsiyey
Kumaa helay guntaadoo
Gacan-qaad la siiyaa?
Miyey gabi habaabeen?
Maadigaa wax gabayoo
Hadba geed is-mariyoo,
Goobba midab la joogoo
In kastoon gucleeyoo,
Gammaankaba ka jiitoo
Cirka sare galaa-baxo,
Adigay la gooshoo
Ma gashaygu baaqdoo
Lagu yidhi ka soo goo?
Mise gaari inan oo
Guur-u-meer ah baad tahay?
Maxaad gama' u diiddee
Dambiyaal waxaan galo
Ama geysto fool-xumo,
Aan gaar u leeyahay,
In kastoon is-giijoo
Weji kale gashada oo
Dadka been ku gaasiro,
Hoos ii guhaadshee;
Inaad tahay ninkeed-gaba,
Maxaad iigu garataa?
Gumaysaad ku nooshoo
Dadkaa kugu garaacdoo,
Kaa gareysan maayaan
Waxad adigu goysee;
Maad galabsan hawlaha
Goco oo ilmeeyoo,
Hooyadaa u goohoo
Galabtay ku dihatiyo
Garaad-daran naftaydaay! Geeri iyo nololeey! Guluf lagu negaadaay! Gabno laga dhergaayeey! Gabbal dumay habeenoo Hadh gadiidan yahayeey! Lammaan aan is-geyinoo Guri qudh ah u hooydaay! Googgaada xaajada Gaaxdeedu waxay tahay, Maan garan xogtaadee, Maxaad uga gol leedahay? Ma wax gaar ah baad too Goonidiisa jira oo Garab aan u baahnayn? Mise gobol dad-weynaha Ka go'aynnin baad tahay? Maadigaa ah Gaarriye? Mise laba gudboonoo Is-geleynin baad tiin? Gurrac-loo-abuuryeey, Bal geddaada ii sheeg. Garaad-daran naftaydaay! Gurey iyo cadceedaha Isku gedo miyaad tiin? Gacal miyaad wadaagtaan? Bal Giriig warkiisiyo Guutadii Fircoon iyo Waxa boqor la gawracay, Ama aad gariir iyo Guri ba'ay u taagnayd, Googoos u mariyoo; Giddi waaxyahaygiyo U galaydh xubnaha oo; Midba gees u taagoo Ka gur sheekadoodoo; Malaayiin gu' oo tegey Ku dheh gebaggebeeyoo; Geeddigoodi dheeraa Mid kastaa guduudiga, Halkay galabba joogtiyo Goorteey kulmeenee Gaarriye sameeyeen, Godolkeeda ii mari. Garaad-daran naftaydaay! Sida gacanka Waaheen Hadba gaaf-wareegaay! Arrin aad gorfeysiyo Waxaad shalay u guuxdaad, Maantana ka giigtaa Gol-daloolo yeeshee; Miyaad dhalan-geddoontoo Dib bay kuu gardaadsheen? Ma runtaa gaboowdoo Geedkeedu waareyn? Guul-darradu dhankay tahay? Guud ahaan waxaad tahay Dadku kugu go'doonyoo Isla waa go'aanoo, Mid baad geesi adagoo Gabbanayn la tahayoo; Maan-gaab lumaayiyo Mid baa ceel ganuuniyo Kuu haysta gocoroo; Mid baa kugu goblama oo Gurxankiisu damihayn Haddii saxar ku gaadhoo; Gaadaa wax boobiyo Mid baad good la tahayoo; Mid baad garab laxaadliyo Ruux guda abaaloo, Loo galo wanaag iyo Gaashaan la tahayoo; Garaadlaay xogtaadii Cidi gaadhi waydee Dadkan kugu gabaabsiyey Kumaa helay guntaadoo Gacan-qaad la siiyaa? Miyey gabi habaabeen? Maadigaa wax gabayoo Hadba geed is-mariyoo, Goobba midab la joogoo Gallibaxa habeenkii? Garaad-daran naftaydaay! In kastoon gucleeyoo, Garmaamada haldhaagiyo Gammaankaba ka jiitoo Cirka sare galaa-baxo, Adigay la gooshoo Iga gaabinaynoo, Goobtaan is-taagaba Adigaa galluubane, Ma gashaygu baaqdoo Lagu yidhi ka soo goo? Mise gaari inan oo Guur-u-meer ah baad tahay? Maxaad gama' u diiddee Iga daba-gureysaa? Dambiyaal waxaan galo Ama geysto fool-xumo, Gabigoodba ceebaha Aan gaar u leeyahay, In kastoon is-giijoo Weji kale gashada oo Dadka been ku gaasiro, Adigaa giraanoo Gunta iimahaygoo, Hoos ii guhaadshee; Godobtiyo xumaantada Inaad tahay ninkeed-gaba, Maxaad iigu garataa? Garaad-daran naftaydaay! Gumaysaad ku nooshoo Dadkaa kugu garaacdoo, Guddoonkooda mooyee Kaa gareysan maayaan Waxad adigu goysee; Maad galabsan hawlaha Kugu gaardiyaayee, Galbiskii adoogaa Goco oo ilmeeyoo, Hooyadaa u goohoo Galabtay ku dihatiyo Eerso uur-galkaagii